यौन जोडीका लागि जाडो मौसम उत्तम ! - नेपालबहस
यौन जोडीका लागि जाडो मौसम उत्तम !
| १९:५३:५४ मा प्रकाशित
१६ माघ काठमाडौं । यौन जोडीका लागि जाडो मौसम उत्तम मानिन्छ। नेपाली समाजमा जाडोबाट बच्ने तीन उपाय अपनाउन सकिने कथनै छ। जाडोबाट बच्ने राम्रो उपाय न्यानो कपडा। दोस्रोमा आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने तथा वातावरणकुलिन न्यानो कोठामा बसेर जाडोबाट बच्न सकिन्छ। जाडोबाट बच्ने तेस्रो विकल्प हो, यौन जोडीबीचको यौन सम्पर्क। जाडो मौसममा यौन जोडीबीच यौन क्रिडा, यौन सम्पर्कजस्ता क्रियाकलाप गर्नाले शरीर तात्ने भएकाले जाडोबाट बच्न सकिन्छ।
जाडो मौसममा महिलाको प्रजनन् क्षमतासमेत मजबुत हुन्छ। यो दृष्टिले हेर्दा पनि जाडो मौसम यौन सम्पर्कका लागि उपयुक्त मौसम हो भन्न सकिन्छ। जाडो मौसममा विशेषगरी महिला प्रजनन्शील हुने भएकाले महिलामा रजश्वलाको एैठनका साथै आक्रान्त हुने समस्या कम हुन्छ। त्यसैले यो मौसममा यौनजोडीबीच यौन उन्माद हुनु स्वाभाविकै हो।
रजश्वलाको समयमा बेचैनी तथा अशान्तपनलाई शान्त गर्न यौन जोडीको अभावमा हस्तमैथुन गर्न सकिन्छ। यौन जोडी वा आफैँ हस्त मैथुन गर्न सकिन्छ। हस्तमैथुन यौनानन्द लिने स्वाभाविक पक्रिया हो। यो विर्य स्खलनको उपयुक्त मौसमसमेत हो। गर्मी मौसममा जाडो मौसमको तुलनामा पुरुषको शुक्रकिटको संख्या केही बढी र चलायमान हुन्छन्। जाडो मौसममा दिन छोटा र रात लामा हुने भएकाले यौन जोडीबीच आत्मियता, माया, प्रेम साट्नुका साथै यौन सम्पर्कका लागि प्रशस्त समय हुन्छ।
जाडो मौसमको चिसो रातमा यौन जोडी धैर्यताका साथ आनन्दले यौन क्रिडा तथा सम्पर्क गर्न रुचाउँछन्। त्यसैले जाडो मौसमलाई यौनका लागि उत्तम मौसम मानिन्छ। जाडो मौसममा काखमा बस्नु, अँगालोमा रमाउनुजस्तो स्वर्गीय आनन्द के हुन सक्छ र यौन जोडीले यस्तो अवसर पाएको अवस्थामा अवस्य स्वर्गीय आनन्द लिन सकिन्छ। संसारभर नै यौन क्रियाकलाप तथा अभद्रता प्रायः जाडो मौसममै बढी भएको पाइन्छ।
साउदीमा तीन महिनामा कोमामा पुगेर बाँचेका भुजेलको उद्धार २३ मिनेट पहिले
श्रीमान हत्या गरेको अभियोगमा महिला पक्राउ ३५ मिनेट पहिले
नवलपुरको बुलिङटारमा जीप दुर्घटना: एकको मृत्यु, १६ घाइते ४५ मिनेट पहिले
गोरखामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
नौ महिना १३.१२ प्रतिशतले बढ्यो आयात ८ घण्टा पहिले
चलचित्र क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सरकारकाे आश्वासन ६ घण्टा पहिले
धरहरा मात्रै होइन नेपालीको स्वाभिमान ठडियो :मुख्यमन्त्री पौडेल ७ घण्टा पहिले
यातायातको सुविधा नभएपछि याकको प्रयोग गर्न बाध्य ६ घण्टा पहिले
मुख्यमन्त्री शाहीले गरे मन्त्रीमण्डल हेरफेर ६ दिन पहिले
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह ६ दिन पहिले
बागलुङका अधिकांश स्थानीय सरकार दमकलविहीन ६ घण्टा पहिले
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने विरामीहरुको संख्या बढ्दो १३ घण्टा पहिले
नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाल महिला संघ दमकको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न ४ दिन पहिले
अजोड इन्स्योरेन्सले हकप्रदको एजेन्डा हटायो २ हप्ता पहिले
हुम्लाका सात हजार क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत २ हप्ता पहिले
जाेखिम बढेसँगै उपत्यकाका २ दर्जन ठाउँमा चेकिङ १ दिन पहिले
अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी निर्माण क्षेत्र सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग २ दिन पहिले
रिभेन्जको पहिलो गीत तिमीदेखि टाढा टाढा सार्वजनिक २ हप्ता पहिले
भेरीमा एकदिनमै १२७ जनामा कोरोना पुष्टि ! ७ दिन पहिले
फर्निचर उद्योगमा आगलागी, ४५ लाखबराबरको क्षति २ महिना पहिले
ओलीको नकचरोपन ६ महिना पहिले
नाङ्ग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने बुद्धिभ्रष्ट प्राणी ४ महिना पहिले
आज आश्विन संक्रान्ति : प्रविधि र मेशिनरीहरूको पूजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाइदै ७ महिना पहिले